May 2019 – Page2– Trend.com.mm
မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ အလုပ်စပ်တူလုပ်တဲ့အခါ လိုက်နာသင့်တဲ့အချက်လေးတွေ…
Posted on May 30, 2019 by Noel
ဘယ်လောက်ပဲခင်တဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ် စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်၊ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင် အမြင်မတူတာတွေ၊သဘောထားကွဲလွဲတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် အလုပ်စပ်တူလုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာ ပိုပြီးသတိထားရပါတယ်။ဒါကြောင့် ကျွန်တော်က မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အလုပ်စပ်တူလုပ်တဲ့အခါ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားမှာလိုက်နာသင့်တဲ့အချက်လေးတွေကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ပြန်လည်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ *ငွေရေးကြေးရေးကို » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, News, WellbeingLeaveaComment on မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ အလုပ်စပ်တူလုပ်တဲ့အခါ လိုက်နာသင့်တဲ့အချက်လေးတွေ…
ဇာတ်လမ်းတွဲသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဇနီးချောလေး သူ့အပေါ်ဘယ်လိုအားပေးခဲ့လဲဆိုတာ ပြောပြလာတဲ့ Song Joong Ki
မေလ ၂၈ ရက်နေ့တုန်းက တောင်ကိုရီးယားမင်းသားချောလေး Song Joong Ki ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲသစ် “Arthdal Chronicles” » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on ဇာတ်လမ်းတွဲသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဇနီးချောလေး သူ့အပေါ်ဘယ်လိုအားပေးခဲ့လဲဆိုတာ ပြောပြလာတဲ့ Song Joong Ki
Shin Se Kyung နဲ့ Cha Eun Woo တို့ရဲ့ ပထမဆုံး ထွက်ရှိလာတော့မယ့် ဒရာမာဇာတ်ကား
Posted on May 29, 2019 by Wint
MBC ရဲ့” Rookie Historian Goo Hae Ryung” လို့ ယာယီနာမည်ပေးထားတဲ့ ဒရာမာဇာတ်ကား » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, MoviesLeaveaComment on Shin Se Kyung နဲ့ Cha Eun Woo တို့ရဲ့ ပထမဆုံး ထွက်ရှိလာတော့မယ့် ဒရာမာဇာတ်ကား
BLACKPINK, Red Velvet, IU နဲ့ အခြား K-pop Girl တွေရဲ့သီချင်းတွေနဲ့ cover dance လိုက်တဲ့ Yoona
Posted on May 28, 2019 by Wint
Gril Generation အဖွဲ့ဝင် Yoona ကတော့ ပရိတ်သတ်တွေကို ထပ်ကြွေအောင်လုပ်လိုက်ပြန်ပြီ။ လတ်တလော နာမည်ကြီးနေတဲ့ K-pop » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in K-Pop, MusicLeaveaComment on BLACKPINK, Red Velvet, IU နဲ့ အခြား K-pop Girl တွေရဲ့သီချင်းတွေနဲ့ cover dance လိုက်တဲ့ Yoona
လူတစ်ယောက်စိတ်ထဲ ဘာတွေတွေးနေလဲဆိုတာ သိရဖို့ သင့်မှာ စူပါပါဝါရှိမှဖြစ်မယ်လို့ ထင်နေတာကို အခုချက်ချင်းပဲ ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတော့။ သာမန်လူတစ်ယောက်ဟာ အခြား » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, WellbeingLeaveaComment on လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကို ကောင်းကောင်းဖတ်တတ်ချင်လား
အကြောင်းပြချက်မရှိပဲ စိတ်ထဲဝမ်းနည်းနေတာ ဘာကြောင့်လဲ ?
နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းရုန်းကန်နေရတဲ့ ဘဝမှာ စိတ်ခံစားချက်အမျိုးမျိုးကို လူတိုင်းကြုံတွေ့ခံစားရပါတယ်။ ပျော်ရွှင်မယ် ၊ ဒေါသထွက်မယ် ၊ ဝမ်းနည်းမယ်။ စိတ်ထဲမှာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, WellbeingLeaveaComment on အကြောင်းပြချက်မရှိပဲ စိတ်ထဲဝမ်းနည်းနေတာ ဘာကြောင့်လဲ ?
Trailer နဲ့တင် ပရိတ်သတ်စိတ်ဝင်စားမှုခံနေရတဲ့ Terminator: Dark Fate
Posted on May 27, 2019 by Wint
ဒါရိုက်တာ Tim Miller ရိုက်ကူးတဲ့ Terminator: Dark Fate ဟာ အမေရိကန် သိပံ္ပစိတ်ကူးယဉ် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Hollywood, Movies, NewsLeaveaComment on Trailer နဲ့တင် ပရိတ်သတ်စိတ်ဝင်စားမှုခံနေရတဲ့ Terminator: Dark Fate
Posted on May 27, 2019 May 27, 2019 by Noel
မကောင်းတဲ့အတွေးတွေ၊အဆိုးမြင်စိတ်တွေဆိုတာ တစ်နေ့ကို တစ်ခါလောက်တော့ အနည်းဆုံး ခေါင်းထဲကိုရောက်ရောက်လာတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာ ကျွန်တော်တို့က အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နဲ့ လက်ခံပြီးဆက်တွေးတောနေတတ်တယ်။ဒီလိုအဆိုးမြင်စိတ်တွေ၊အတွေးတွေကို မကြာခဏတွေးတောနေတာဟာ ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုလည်းဆုတ်ယုတ်စေသလို » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in UncategorizedLeaveaComment on အဆိုးမြင်စိတ်တွေချက်ချင်းပျောက်ကွယ်သွားမယ့် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း
သူများအကြောင်းဆို စိတ်ဝင်စားတယ် ၊ သူများဘာလုပ်နေလဲ အမြဲစပ်စုနေတတ်တဲ့ လူ့အသိုင်း ဝိုင်းထဲမှာ မင်းလည်း ဒီလိုပဲလား။ မင်းလည်း » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, WellbeingLeaveaComment on ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိအောင် လုပ်ပါ….
သူဟာ သင့်ရဲ့ အပေါ်ယံရုပ်ရည်သွင်ပြင်ကိုသာ မက်မောတာဖြစ်ကြောင်းပြသနေတဲ့အချက်တွေ….
Posted on May 27, 2019 by Noel
့ကိုယ်အခုတွဲနေတဲ့ချစ်သူရည်းစားက ကိုယ်လှလို့ချစ်နေတာလား ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်စိတ်ရော လူရော တကယ်ချစ်တာလား?နှစ်ခုလုံးလှလို့ချစ်တာဆိုရင်တော့ သိပ်ပြီးကိစ္စမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ အပေါ်ယံရုပ်အလှကိုပဲ မက်ပြီး ချစ်တာဆိုရင်တော့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on သူဟာ သင့်ရဲ့ အပေါ်ယံရုပ်ရည်သွင်ပြင်ကိုသာ မက်မောတာဖြစ်ကြောင်းပြသနေတဲ့အချက်တွေ….